फागुन ११, २०७४ बिगुल न्यूज - DG
एजेन्सी – भारतको मुम्बईस्थित नालासोपारा(पूर्व) मा आइतबार एक अनौठो मामिला सामुन्ने प्रकाशमा आएको छ, जसमा एक २१ वर्षीय युवकले २० वर्षीय आफ्नो प्रेमिकाले यौन सम्बन्ध राख्न इन्कार गरेपछि हत्या गरेको छ। युवकले आफ्नो प्रेमिकाले यौन सम्बन्ध राख्न असहमति जनाएपछि हत्या गर्न बाध्य भएको बताएको छ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार अभियुक्त युवकको नाम हरिदास निर्गुणे र प्रेमिका युवतीको नाम अंकिता मोरे बताईएको छ। यो भनिएको छ कि हरिदास र अंकिताको दोस्ती फेसबुकमार्फत भएको हो। अंकिता वाशी निवासी हो भने हरिदास नालासोपाराको बासिन्दा हो। रिपोर्ट अनुसार अंकिता आइतबार आफ्नो प्रेमी हरिदासलाई भेट्न नालासोपारा आएकी थिईन, जहाँ हरिदासले अंकितालाई सेक्स प्रस्ताव गरे तर अंकिताले नमानेपछि हरिदासले उनको हत्या गरेका थिए।
एक अंग्रेजी अखबारको समाचार अनुसार वाशी निवासी अंकिता मोरे आफ्नो प्रेमी हरिदास निर्गुणेलाई भेट्न नालासोपारा आएकी थिईन। उक्त रिपोर्ट अनुसार हरिदासले नै अंकितालाई भेट्न बोलाएकी थिए भनिएको छ। जब अंकिता आफ्नो प्रेमीलाई भेट्न उनले भनेको स्थानमा भेट्न गईन तब प्रेमी हरिदासले उनलाई सेक्स प्रस्ताव राखे तर अंकिताले इन्कार गरिन। अंकिताले अस्वीकृति जनाएपछि हरिदास रिसले चुर भई जुत्ताको लेस निकालेर अंकिताको घाँटी कसी हत्या गरे।
अंकिताको हत्या पछि हरिदासले उनको मृत शरीर त्यहीँ छोडी भाग्न सफल भएका छन्। प्रहरीले अंकिताको मृत शरीर नालासोपाराको तानिया मोनार्क बिल्डिंगको ए-विंगको सिढीमा फेला पारेका छन्। प्रहरीले अंकिताको मृत शरीरलाई पोस्टमार्टमको लागि अस्पताल पठाईसकेका छन् र आरोपी हरिदास विरुद्द आईपीसी धारा -३०२ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
तुलिंज पुलिस स्टेशनको एसआई किशोर खैरनारले मिडियालाई भने, ‘हामीले अभियुक्त विरुद्द धारा ३०२ अन्तर्गत हत्याको केस दर्ता गरेका छौँ। ‘ उनले यो पनि भने कि ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा युवतीलाई जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य भेटिएको छ , तर अहिले यो मुद्दाको अनुसन्धान चलिरहेको हुनाले सबै कुरा पछि गर्नेछौँ। ‘
प्रकाशित : शुक्रबार, फागुन ११, २०७४१५:०४
कस्तो अच्चम्म जन्मनुभन्दा तीन वर्षअघि नै अपराधी ठहर : अहिले जेल चलान
२० हजार चालकलाई सिसिटिभीले यसरी कारवाहीको भागिदार बनायो ! घर-घरमै चिठी पठाइयो !
अश्लील सामग्रीहरू राखेको आरोपमा बङ्लादेशका २० हजार वेबसाइट बन्द !
राँगा चोकमा टेम्पोलाई स्कुल बसले ठक्कर दिएपछि …
जीपको ब्रेक नलागेपछि पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिँदा निशानको मृत्यु !
सशस्त्र प्रहरीमाथि गाँजा तस्करको समूहले गोलि हनेपछि …
इन्डोनेसिया भूकम्पमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या १०० पुग्यो , उद्धारकार्य जारी !